About Us - Fullerton Finance Co., Ltd. - Myanmar
ဖူလ်တန်မြန်မာသည် ၂၀၁၃ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး မြန်မာ့အသေးစားငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ကို ၂၀၁၅ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ရရှိခဲ့ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပထမဆုံး ဌာနခွဲအနေဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်း၊ သာကေတမြို့နယ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ချေးငွေထုတ်ချေးခဲ့မှုအနေဖြင့် ၂၀၁၄ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ပထမဦးဆုံး ထုတ်ချေးခဲ့ပါသည်။ လပေါင်း (၇)လ အတွင်း ဌာနခွဲ (၁၂)ခုအား တိုင်းဒေသကြီး (၃)ခုဖြစ်သည့် ရန်ကုန်တိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်းနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းတို့တွင် ထပ်မံ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ် မေလ စာရင်းအရ ဖူ(လ)လတန်မြန်မာသည် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး (၉)ခု မှ မြို့နယ်ပေါင်း (၉၆)ခုကို ဝန်ဆောင်မှု ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ အဖွဲ့ဝင် မိသားစုပေါင်း ၂၀၀,၀၀၀ ကျော် ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးထားနိုင်ပြီး၊ ဝန်ထမ်းပေါင်း (၁,၀၀၀) ကျော်ကို အလုပ်ကိုင်အခွင့်ရေးများ ဖန်တီးပေးထားနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကုမ္ပဏီသည် မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်ဒေသ နှစ်ခုလုံးတွင် အချိန်ကုန်သက်သာစေရန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်သွေးတိုးတက်စေရန် အသေးစားငွေကြေးလုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် နည်းပညာအသစ်များကို အသုံးပြု လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ ဖူ(လ)လတန်မြန်မာအနေဖြင့် နောင်လာမည့်နှစ်များတွင် ပိုများများပြားသော ယခုထက်ပိုမိုသော ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး အရေတွက်နှင့် ပိုမိုများပြားသော အဖွဲ့ဝင်များကို ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။
အောင်မြင်ရန်အထောက်အကူပေးပြီး , ဘ၀များကို ကြွယ်ဝချမ်းသာစေမည်။
ဖူလ်တန်မြန်မာတွင် no dream is too small။ သေးငယ်သောလုပ်ငန်းများကို ချေးငွေများ ထောက်ပံ့ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ချေးငွေရယူသူများကို အောက်ခြေလူတန်းစားအဆင့်မှ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုများ တိုးတက် တည်မြဲစေရန် ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၄င်းတို့၏မိသားစုများကို ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘ၀များ ဖန်တီးပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
အလေးထားသော-ကျွန်ုပ်တို့ကာစတန်မာများနှင့် ပြည်သူလူထု၏ အခက်အခဲများကို သေချာစွာနားထောင်၍ သဘောပေါက်နားလည်စေပြီး ဖြေရှင်းပေးပါသည်။
တိုးတက်စေသော-ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ချဉ်းကပ်မှုတိုင်းကို တိုးတက်စေရန် စဉ်ဆက်မပြတ် ရှာဖွေပေးနိုင်ပါသည်။
အားပေးထောက်ပံ့ခြင်း- ကျွန်ုပ်တို့ကာစတန်မာများနှင့် ပြည်သူလူထု၏ လိုအပ်ချက်များကို အရေးထားဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
အင်တိုက်အားတိုက်ရှိသော-ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြံရည်ဖန်ရည်ရှိပြီး တက်ကြွမှု၊ အောင်မြင်မှုအပြင် စိတ်အားထက်သန်မှု၊ ပျော်ရွှင်မှုအပြည့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
Capital Diamond Star Group (CDSG) was founded in 1960 and is currentlyaleading Myanmar Conglomerate. CDSG is engaged inanumber of different sectors in Myanmar, including: food manufacturing and distribution; agribusiness; retail; real estate; health care; financial services and automotive. CDSG has an extensive and multi-channel nationwide distribution network covering over 90% of the country, and boasts three “No. 1” brands in the country – Premier Coffee, Armo and Diamond Star. Currently, the company employs over 7,000 staff.